Mino Raiola oo shardi adag hor dhigaya kooxaha doonaya Erling Haaland… (Hal milyan & hal asbuuc) – Gool FM
(Dortmund) 11 Abriil 2021. Sida ay wararku sheegayaan, wakiilka Erling Haaland ee Mino Raiola ayaa doonaya inuu laacibka kooxda Borussia Dortmund ka dhigo xiddiga ugu mushaharka badan kubadda cagta.
Kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa isku garbinaya saxiixa Haaland, waxaase Raiola uu diyaarinayaa dalbasho aysan awoodi karin tirada ugu badan ee kooxaha doonaya 20-jirka weerarka ka ciyaara.
Wakiilka awoodda badan ee Mino Raiola ayaa doonaya inuu laacibkan usoo gacan geliyo heshiis uu toddobaadkii ku qaadanayo Hal milyan oo gini, isagoo noqon doona xiddigii ugu horreeyay ee mushahar intaas la eg ka qaata kubadda cagta.
The Mirror ayaa ku warrameysa in kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo si rasmi ah ula kulmay wakiilka Haaland iyo aabbaha dhalay xiddiga oo lagu magacaabo Alf-Inge ay ka amakaageen dalabaadka la hor dhigay.
Sidoo kale, Manchester City, Chelsea iyo Manchester United ayaa dhammaantood raacdo ugu jira laacibka reer Norway hase ahaatee, caqabadda ugu weyn ee ay wajahayaan ayaa ah in Raiola uu doonayo inay helaan yaboohii ugu qaalisanaa taariikhda kubadda cagta.
Barcelona oo ka war heshay xiisaha Liverpool ay u qabto mid ka mid ah xiddigaheeda iyo kooxda reer Spain oo...